Galgaduud: Weerar lagu diley dad shacab ah oo daba Socda Saraakiishii lagu diley Duleedka Guriceel | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Galgaduud: Weerar lagu diley dad shacab ah oo daba Socda Saraakiishii lagu diley Duleedka Guriceel
Jan 13, 2021 - 27 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya Weerar kale oo dhiig ku daatay Kaasi oo maanta ka dhacay Deegaano Hoostaga Degmada Ballanbale ee Gobolka Galgaduud, Waxaana lagu diley ugu yaraan 5-Qof oo shacab ah, Wuxuuna dilkan daba socdaa saraakiil ka tirsan Ciidamada Xooga dalka oo horay loogu dilay deegaano u dhow Guriceel.
Cali Yare oo kamid ah masuuliyiinta Gobolka Banaadir, Kana soo jeeda deegaanada Galmudug oo ka hadlay Arinta Cusub ayaa yidhi.
“Waxaan ka xumahay dhawaqa naxdinta leh ee ka imaanaya deegaanka Xirsi lugeey ee hoos yimaada Degmada Balanbale waxaana alle uga baryayaa inuu raxmadiisa siiyo dadkii shacabka ahaa ee la laayay.
In la laayo dad shacab ah oo aan dirir ku jirin waa dhaqan aan meelna uga jirin darisnimada iyo walaalnimada, sidoo kale waa mid aan waxba ka duwaneyn dhacdadii foosha xumeyd ee lagu laayay saraakiishii Soomaaliyeed.
Maamulka Galmudug iyo Indheergaradka labada dhinac waxaa saaran masuuliyad la waydiinayo maanta iyo maalinta qayaame labadaba waana in ay kaalintooda qaataan. “ Ayuu yidhi Cali Yare.
Dhinaca kale Xildhibaan Mahad Salaad oo laga soo doorto degmada Guriceel ayaa isaguna Arintan ka hadlay.
Waxaan cambaareynayaa weerarka bahalnimada ah ee galabta lagu xasuuqay dad Shacab ah Tuulada Xirsi Lugey ee hoostagta Degmada Balanbale, Intii dhimatay Allaha u naxariisto inta dhaawaca ahna Allaha u boogo dhayo.
Waxaan ugu baaqayaa laamaha amniga in ay gacanta ku soo dhigaan dambiileyaashii falkaan geystay, cadaaladana la hor keeno. Dadka deegaankana waxaan ugu baaqayaa in ay isdejiyaan, waqtina la siiyo laamaha amniga.
Qaan Mareexan waa qaaxo kugu maqan.
Is gaad gaada Walaalaha GALGADUUD, Kaare Kuukuuyana waa ku sugaa.
Inaa lilaahi wa inaa ilaahay raajacuun. EEBE Asagaa laga yimid asagaana loo noqon.
Dadkan la laayey waa shacab arday Dugsi Quraan Iyo Macalinkoodii la xasuuqay. Waxaa dishay gacan ka xaq daran. Allaha ha u naxariisto.
Kolay fidnadaan bilaabatay meelo badan waa gaari Doontaa haduusan caqligu shaqayn.
Maalin kasto Soomaaliya waxaa ku dhinta dad aan Waxba galabsan si xaqdara ah.
Waxa soosocdaa ka daran . Dadkii ficilka bahalada aka dugaagga lahaa wali way noolyihiin .
” Dhaxal dhagar qabe “
Waa kaas caqli daanyeernimadda ilkayarta Mareexaan iyo Ceeyr. Waa labba reer oo aad iyo aad u caqli xun waxyar oo kamid ah maahanee. Somalidda waa xaasidiin intooda baddan sababtoo ah ma arkeeysid iyaga oo runta u sheegaya labadaan reer iyo qabaa’iladda kale marka eey waxuushnimadaan oo kale sameeyaan. Waa in la nacladeeto, la Kashiffo, hadalka ugu adag lagu cambaareeyo waxuushnimadda dhiiga dadka lagu daadinayo. Markaas, iyo markaas kaliya ayeey dadka iska dhaafi karraan daanyeernimadaan ah in nafta xoogii, iyo shacabkii Somaliyeed si maalaayacni ah loo gooyo.
Daanyeero Qoorqoor nacald ayaa kugu dhacday, waa daanyeer sababtoo ah intii uu dadkaan caqliga xun re la dhahay waad hogaamisaa ku dhex jirri lahaa, ka shaqeeyn lahaa in dhaqanka foosha xun ee lagu yaqaan balaayadda dagan Galmudug ka badalli lahaa ayuu Xamat uto doorasho, iyo shirar beenbeen ah ku mashquulay.
Ilkayar iyo Ceeyr maadaama eey reero fashillan yahiin, waa in shacab laga qabtaa is dilka eey isku wadaan, marmarna ku wadaan qabiiladda kale. Sidaas owgeed walaahi waa qalad in Farmaajo iyo qashin kasoo jeeda dadka noocaas ah iska dhaaf madaxweeynee xataa aanan xil hoose iyo mas’uuliad yar xataa lagu aaminin.
Tani waa kaduwantahay saraakiishii waa ceel kuyaala tuulo tuulo Cali mire waxaa mudo kudagaalsanaa reer ayaale cayr iyo reer warsame diini waa arin runtii xanuun badan in nabadoon xirsi lugeey wiilkiisa oo dugsi quraan kuleh tuulada ladilo qoor qoor waxaan udooranay inuu beelaha galmudug mideeyo laakiin wuu gabay hawshaas anagu ragaas waa soo qabanaynaa gacan kudhiigle maqarsano
Hadlada qalafsan ee ka soo yeedha kuwa isku sheega Siyaasiyiintu waxay keenaayaan inay kiciyaan cadiifada Qabiilka ee xag jirka ah.Dadku ma fahansanaa in waxani yihiin wax ay hogaan u yihiin kuwa ku hadaaqaya qabyaalada ee isku sheega Golaha shacabka iyo Madaxwayneyaal hore.
Waa Bulsho u taagan kicin qabiil iyo cadiifad iyagoo siyaassad ka dhigtay Reernimo.Dee kuwii Miyaga ayaa isku maqan.
Idku soo wada duub oo Mahad Salaad iyo Cc waa inay badalaan hadaladooda kicinaya dadka Miyiga jooga.
Saleeban igana hadda ayey kashilmeen, maadaa daanyeer Qoorqoor oo xitaa timahiiisa dhinac u xiirmin oo Deni iyo Madoobe yes ku oran, Farmaajo yes ku oran, Mucaaradka Hawiye yes ku oran, hadhowna inkirin wixii kala hadlay..waa faashil.
Hadduu Galmudug atkeast maamulka xoogiisa agdhigilahaa waa loo garaabi lahaa.
He is really useless.
Habargidir Saleebaan ugu macquulsan, I am not sure anymore.
Cayr- Reer Ayanle iyo Mareexaan 100 sano isdilayeen hadana u malayn maayo in dhamaan.
Waxay u baahnaayeen madax dhaqan vision leh
You can’t choose your neighbour, have no choice but to life with them in peace.
Xariif aa tahay jambalka in aad ku dheerayso waa Ku ogahay!
Maye Majeerteen Cali Saleebaan baa ugu Macquulsan. lol
Kkkkkkk alaylehe waad asiibtay alla runtu macaanaa
Aaway imaam dabshid madbaco MBC
Soo gal barxada imaam hobyo godan hadalkiisa waa qoorigii saamka ahaa ayuu tuuray maanta
Hobyo godan waa isgaranaysaan waa gaalkacyo .col cabdulaahi yuusuf v gen.maxamed faarax caydiid ninba ninbuu yaqaan barxada waa laydiin baneeyay habiqlayso waa halkii daahir calasoow
Amaba wiilkii ina fulaan ha ahaado amaba qof kale waxaa la rabaa in aad dadkiina iyo kuwa kale u sheegtaan in eey xaaraan qadcan ah tahay in si mutacamid ah naf loo gooyo. Sidaan sheegayba hadii waxa xun in eey xun yahiin la sheegi lahaa, qabiilada wax xun sameeyana la Kashifi lahaa change ayaa imaan lahaa oo dadka waa is badalli lahaayeen. Maahan in laga baqqo reer hebel waxeey kuu arkayaan in aad necebtahay iyo blah blah marba hadii Ilaahey kugu ogyahay calooshaada in eeysan naceeyb iyo “motive” kale ku jirrin. Meeshaas siyaasi isku sheega Somalida iyo xataa oday dhaqameedka waa fahmi la’yahiin. Xataa kuwa media ha isku sheega iyo saxaafad ee aanan aqoonta laheeyn weey diidaan in qabiil magaciisa la sheego iyaga oo u maleeya in eey qatar yahiin oo wax fiican sameeynayaan. On the contrary, maadaama aan ognahay in aan joogno heer bulsho nomad ah oo qabiil aaminsan waa in aanan laga cabsan sheegidda qabiiladda.
Land of punt and Gedo land, haa atrinka Qootqoor in uu daanyeer yahay waan isku raacsanahay. Markii horreba jaahil ayuu ahaa just like inta badan waxa meesha yaacaya. Haba ahaadee, wxeey aheeyd in uu ku mashquullo raadinta dadka goboladdaas ugu macquulsan oo uu xooga saaro amniga, dib u heshiisiin dhab ah, iyo 20 beer oo waa waaweeyn oo maamulka leeyahay oo 20 meel oo deegaankaas ah laga sameeyo oo cunto dadkaas lasiiyp lagu beero, iyo xoolaha nool oo maamulka leeyahay oo lagu korriyo kadibna la gaddo, iyo 50 doon oo maamulka leeyahay oo malaay dadka deegaankaas dagan cunnaan lagu soo qabto.
Wax uun inta uu ka fakarri lahaa ayuu daanyeer Qoorqoor ku warwareegayaa Xamar iyo ruufiyaanimo aanan lagu aqoon reerka. Waa nooc cusub oo waqti kooban siyaasadda ku jirri doona.
Dagaalka qabiilku waa afka iyo gacanta.
Haddi intaan meeshaan ku jirta afka haggaajiyn gacanni dhici mayso.
Laakiin haddi aaybu maalin walba halkan dagaalka afka ku jiro, gacanni joogsan mayso!!!
Waad mahadsantahay, Muusow. Waa sidda eey kula tahay, waana suurtagal in aad saxsanyahay. Afka aduunka oo dhan ayaa ka hadla as long as uusan dadka dagaal ku kicineeynin. Is dilka daanyeernimadda Somalida af iyo af la’aan sidaas ayeey isku baabi’inayeen waxaana dhici karta in carro Ilaaheey ku dhacday.
– Saqiir Majeerten sir la’aan ma dhinto.
– Saleemaan sir laga waayey waa Zebra sarmo laga waayey.
Ugaas bunka xagaada waaye kkkk
Hadii aniga walaalkay oo iga weyn ama iga yar layiraahdo waa nin caqli badan oo caaqil ah, waa inaan farxaa oon ku farxaa amaantaa walaalkay la amaanay oo aan iraahdo ILLAAHAY ha u sii siyaadiyo, laakiinse inaan ka naxo oon dood ka keeno waa xaasidnimo iyo caqligii daanyeerada ee uu cadaado Soomaalida ku sheegi jiray.
Eebow maah maahdan waxaa soo cusbooneysiiyey Governor Qoor Qoor oo Qub Moos ku kufey.
War nin yahoow Kalshaale in aad nagu qarxisaad Rabtay laakiin nasiib wanaag waanu ka bad Baadnay gantaalkii aad nagu soo gantay. lol
Gedo Land lol
Waad aragtaa waxa meesha ka socda. Hade cida reer Adeer maxaad ku taqaanay? Yaa dad madaxa Isku galshay gacanaan u taagay Majeerteen Mudug.
Aniga jambal kama wadin in Sacad, Saruur iyo Cayr hoos u dhigayo.
Saleebaan weligood waa pragmatic og meesha dabaysha u socoto.
Kacaankii markii ku kaceen USC iyo SNM ma jirin.
SSDF ku biireen..
Markii maamulo lakala noqday Ximan&Xeeb samaysteen.
Cadaado waxay noqon meel Habargidir ku shirto maamulka Galmudug.
Sacad markay xoogaa xoog isku arkaan Galkacyo xabad ku bilaaban oo ka weynayd Garoowe iyo Bossaso, maanta tuulo noqotay colaad Sacad iyo Cumar Maxamud looga guuray.
Dhuusamareeb Cayr qas kawaday in dhisanto.
Gaalkacyo Sacad qas kawaday in dhisanto.
Cadaado nabad ka dhigeen Saleebaan.
Dadkaas reer Cadaadi macquul u arkaa.
Jambal tuur maaha.
By the way; Cali Saleebaan waa ka macquulsan yihiin Maxamud Saleeban, maaha dad dagaal guul u yaqaan ama qabiil ahaan la iskubdifaaco, laakiin haddii Puntland loo dhiibo Galkacyo Sacad ku wareejin..
Booye Bari iyo Nugaal naga badan ee Mudug, Sool iyo Sanaag naga reeba ayey oran…Boowe nimcadaan bad iyo beri leh naga badan, dagaalna ilow, ma Somali ayaa nin dagaal aqoon bariis u ogol….kkkkkkkkk
Saaxiib Soomaali maryoolay waxba isma dhaamaan Waa wada eber zero. Dad keena saa uma sii xumee Madaxdeena kuwa na horbooda ayaa dadka ugu Xun inta kalana hayin bay u noqdaan oo qalad iyo Sax ba way ku raacaan horjoogahooda.
Laakiin shacabka hadii ay heli lahaayeen Horjoogayaal wanaagsan sida Erdogan oo kale Waa horaan dayaxa dushiisa ku socon lahayn.
Ma lagaaga sheekeyey in waagii USC Galkacyo qabsadeen Cabdulaahi Yusuf yiri waa in xorayno Galkacyo ee keena reer Bari rag iyo lacag.
Waxay yiraadeen; waa yahay, ilaa Qaldala, Raascayr, Xaafuun, Badanbayla, Baargaal, Iskushuban ilaa Hurdiya laga yimid, 1000 gaari hubayn iyo rag.
Markay 2 beri socdeen oo Bossaso soo dhaafeen ayey Dhufays galeen markii meel degeen, waxay moodeen in goobtii dagaalka la yimid..
Waxaa loo sheeegay intaa Qardho iyo Garoowe la garin. Boowe meesha fogaa.!
Markii Garowe marayaan oo Buurtinle gaarin oo loo shegay goobta dagaalka waa dhowdahay ayey markay Buurtinle nalka arkeen dhufays galeen waxaa loo sheegay in Galkacyo maalin kale u sii jirto..kkkkkk
Boowe dhulkaan baa naga badan wixii ka shisheeya cidda rabta siiya..kkkkkkk
Dhulkii soo marnay ayaaba cidla ahaa oo dad u baahan…..kkkkkkkkk
Hadana cuntadii reer Mudug la qabsan waayeen cad iyo caano joogta ah, no kalluun?..kkkkkk
Ma raggaas ayaad dagaal u dirsan…kkkkkkkkk🤩
Iimaam Dabshid, kkkk waan kula socdaa.
Sir waa siyaasad, waa xisaabtan. Marka wax xun maahan dadku in eey sir lahaadaan, oo aanan la fahmin waxa eey damacsanyahiin. Lols.
Laakin, kan Qoorqoor ee caqliga daanyeerka ah leh waa meel marran. Meeshii uu ka ajarsan lahaa umadda Somaliyeed ee madaxa iskula jirta, oo hadii uu xataa karri waayo, uu raadin lahaa dad isku keena si Lilaahi ah madax isku sheegaan Somalida, ayuu munaafaqnimo iyo sidii dhoocil u kala warqaadayaa dadkii. Waa dhaqan aan barri ka nahay. Dad badan oo Somaliyeed oo u badan dad aanan qabiilkiisa aheeyn ayaa ninkaan si xamaasad iyo kalsooni ah buunbuuniyay. Innagu waxaan laheeyn, war hooy yaanan lagu dagdagin amaanta, amaba caayda amaba dilka dad ilaa la’ogaada si shaki la’aan ah inta uu caqligooda gaarsiisan yahay.
Saaxiib waan kugu raacsanahay reer Bari ma jecla Shidada. Aniga waxaan ilma habreed nahay Dashiishle waligay maan arag ayagoo wax kale ka Sheekaynaya aan ka ahayn Beecmushtar.
Laakiin waad ka waasheen ilaa ay markii Dambe Magacyo idiin bixiyeen.lol sida Cumar Rabsho iyo Falastiin. Kkkk
Nabad wax dhaama la waa.
Saleebaanku waa macquul.
Xagga hawadu u socoto ayay raacaan kkk
Waagii dagaslks Ssdf ayay ku biireen,markii Mamulgoboleedkana Xubin iyo xeeb ayay samaysteen kkk
Waa yaab e hawada ma idinka ayaa wada?
Ssdf ku biir.
Pintland samayseen,Xubin iyo Xeeb samaysteen.
Eedh calaa hadal nin wayn.
Mubaafaqad iyo jampall buu dhinac walba u tuuray…
Wuxuu yiri Ree Ayaanle vs Mreexaan…
Yacni dagaalka Ree Warsame Diini vs Ayaanle ayuu ka dhigayaa Jufo Cayr ah vs Mrexaan… Xidtaa wuu u quuri waayay Cayr vs Mrexaan…
Inta dhimatay Allaha u naxariisto, aad baan uga xumahay barbarinimada meeshaa ka socota… Waa in dadkan cawaantaa la dhex galaa…
Waar horta ma la hubaa in uu raggaa Mrexaan dilay?… Armaa la isku diray oo gacma kale ka adeeganayaan meesha?… Cadow badan bay reer Galmudug leeyihiin oo munaafaqadda hibo loo siiyay..
Mareexan cidda Ayaanle la dagaalaysay ma ogeyn in Warsame Diini yshay, saas iskugu qabtay.
Ayanle iyo Mareexan isdilaya meel ka aqriyey.
In Mareexan iyo Ayaanle simayn waa ogtahay ee cuqdada iska daa.
Meel kale aan kasoo galo laakiin rag ishaysaan kuu garduubi maayo. Taas Cumar Maxamud ka ahay….kkkkkk